I-Oukitel WP6 entsha iya kuthengiswa ngo-Matshi 20 olandelayo I-Androidsis
I-Oukitel WP6 entsha iya kuthengiswa ngoMatshi 20 ozayo
UIgnacio Sala | | Izixhobo ze-Android, I-Oukitel
Xa uthenga i-smartphone entsha, akufuneki ukuba sizibeke kwixabiso kuphela, nangona ihlala iyinto ephambili ekufuneka ithathelwe ingqalelo. Enye into ebalulekileyo, ukongeza kwixabiso kunye nokusebenza, yimeko yokusetyenziswa eya kuba nayo. Ukuba sihlala sisebenza ngaphandle, kwiindawo ezinobutshaba okanye sithanda ukuphuma siye ebaleni, kuya kufuneka sijonge I-smartphone ekrwada.
Kwiminyaka yakutshanje, ukubonelelwa kwee-smartphones ezingagungqiyo kunyuke kakhulu ukuhlangabezana neemfuno zabo bonke abasebenzisi. Umenzi waseAsia u-Oukitel, esithethe ngaye izihlandlo ezahlukeneyo kwi-Androidsis, usinika iWP6, njengeImartphone ebunjiweyo ekwadibanisa ibhetri enkulu ye-10.000 mAh kunye nekhamera ye-48 mp. Esi sixhobo siza kufika kwimarike ngo-Matshi 20.
Iglasi ye-Ouitel WP6 ikhuselwe yitekhnoloji yeCorning Gorilla Clas, ene Ubukhulu be1.1mm. Kule vidiyo ingentla, siyabona ukuba nokuba kunokusetyenziswa njani na, xa kusombiwa isikhuseli sesi sixhobo sitsha esirhabaxa, esinika uxhathiso esingasokuze sikwazi ukulifumana kwezinye iiterminal.
Iitheminali ezinerugging azidingi kukhuseleko kuphela, kodwa, kwiimeko ezininzi, zisetyenziswa kwiindawo apho umbane unokungafumaneki kuwo wonke umntu. Ibhetri I-10.000 mAh isinika yona, iyahambelana ne-18W ekhawulezayo, isivumela ukuba sisebenzise kakhulu i-terminal kangangeentsuku ezi-3, kunye neeyure ezingama-52 zeefowuni ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-25 zokukhangela kwi-Wi-Fi.
Kwicandelo lokufota, sifumana iikhamera ezintathu ngasemva, eyona iphambili I-48 mpx, Isisombululo esiya kusivumela ukuba sondle imifanekiso ngaphandle kokulahlekelwa ngumgangatho. ngaphambili, sinakho ikhamera ye-16 mpx, ikhamera esetyenziswayo ukubonelela ukuvula ngobuso bethu.
Ukulawula i-Oukitel WP6, inkampani yaseAsia iphinde yaxhomekeka kwiMediaTek, kwi-chip Helio P70, iprosesa eyisi-8 engundoqo ehamba kunye I-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina kwangaphakathi. Isikrini se 6,3 intshi, Inesisombululo se-2.340 × 1080 kunye nomyinge we-18: 9, kwaye njengoko benditshilo apha ngasentla, isebenzisa itekhnoloji yeGlning Gorilla yeGlass.
Ukusukela nge-Matshi 20, ungasebenzisa ithuba le Intshayelelo ngeAliExpress kwaye ugcine i-30%, ke ixabiso layo lokugqibela li- $ 199,99.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-Oukitel WP6 entsha iya kuthengiswa ngoMatshi 20 ozayo
IGithub ngoku iyafumaneka kuye wonke umntu emva kokuphuma kwe-beta
I-Dark Champion ifika njengeklasi entsha kwi-Black Desert Mobile